हाम्रो घर आँगनमा दशैँ भित्रिसकेको छ। बिगतका दशैँहरु जस्तो यसपालीको दशैँ भने पक्कै रमाइलो छैन कोरोनाले गर्दा । तरपनी यस बर्ष घर परिवार बिच खुशीयाली साटेर मनाउने तर्खर गरिँदैछ ।
दशैँ आउने बित्तिकै सबैको मनमा खुशी, हर्ष छाउने गर्छ । नेपाल आँफैमा पनि सँस्कृतीको धनि देश हो । त्यसैमाथी पनि दशैँले हरेकको अनुहारमा खुशी छरेको हुन्छ । बिगतमा प्रदेशीहरु घर फर्किने एउटा मौका हुन्थ्यो दशैँ । अझ भनौँ बर्षौ बिछोडीएका सदस्यलाई पनि भेटाउने गर्दथ्यो दशैँले ।
कोरोना कहरका कारण यसबर्ष भने ति सबै कुराहरु सम्झनामा मात्र सिमित भएका छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस बर्षको दशैँमा किनमेल नगर्न आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकोले यस बर्ष पुरानै लुगा लगाएर दशैँ मनाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
यसैबिच नेपाली गीत संगीतमा लागेर आफ्नो पहिचान बनाइसकेका केही कलाकारहरु भने बिगत केही बर्षयता आफ्नो जन्मभुमी भन्दा पर रहेर कर्म गरिरहेका छन् । यसैबिच केही चर्चित कलाकारहरुलाई दशैँमा के कुरा बढी सम्झदै हुनुहुन्छ भनी सोधेका छौँ ।
सर्जक, मिन दर्लामी
“जोर शंख फुकेर”, “लाउथें माया घातै घात भो”, “सुन मेरो साथी” लगायतका गीतका सर्जक मिन दर्लामी पनि बिगत १४ बर्षदेखी अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यसबर्ष उहाँले दशैँ अमेरिकामै मनाउने हुनु भएको छ। आफ्ना स्रोता तथा दर्शकलाई शुभकामना दिंदै उहाँ भन्नुहुन्छ,- ‘सर्बप्रथम देश तथा बिदेशमा रहनु भएका सम्पुर्ण नेपालीहरूलाई शुभ बिजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना । सदैब स्वस्थ रहनुहोस खुसी रहनुहोस ।’
उहाँ बालापनका दशैँ सम्झँदै भन्नुहुन्छ, -‘दशै भन्दा बित्तिकै त्यो समय नयाँ लुगा लगाउन पाईन्थो र त्यही लुगा दशैँ पछाडी स्कुल लगाएर जान पाईन्थ्यो, किनभने त्यही नयाँ लुगा स्कुलको पोशाक हुने गर्दथ्यो । त्यो समय नयाँ लुगा लगाउन दशैँ नै कुर्नु पर्दथ्यो । त्यो रमाईलो पलहरू सम्झिँदा आज भोली एउटा एकादेशको कथा जस्तो लाग्दछ । त्यो समयका साथीहरू कोही गाउमा, कोही शहरमा, कोही बिदेशमा हुनुन्छ भने कोही अल्पायु मै परलोक भै सक्नु भएको छ ।’
आफ्ना साथीभाइ र आफन्तलाई सम्झँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, – ‘देशमा रहनु भएका बृद्ध आमा, दिदीहरू, दाजुहरू भदा-भतिजहरू लगायत सम्पुर्ण आफन्तीहरू र देश-प्रदेशबाट घरमा आउने आफ्ना पुराना मित्रहरूलाई धेरै सम्झी रहेको छु । साथै आफ्नो सांगीतिक यात्राबाट बन्नु भएका साथी भाई र भगवानरूपी स्रोता दर्शकहरूलाई औधी सम्झी रहेको छु ।’
उहाँले अमेरिकन आर्मीमा तालिम गर्दै गरेकी छोरी सम्झँदै यसबर्षको दशैँ योजना सुनाउनुभयो, – ‘यस बर्षको दशैँ पहिले भन्दा फरक तरिकाको दशैँ बनेको छ । यो बर्षको दशैँमा मेरो ठुली छोरी बिष्णु दर्लामी हामीसँग रहने छैनन् । त्यस कारणले हामीलाई केही खल्लो हुनेछ । किनभने छोरीको अमेरिकन आर्मीमा तालिम चलीरहेकोले केही कतै ठाउँ खाली भएको अनुभुती गर्ने नै छौँ ।
उहाले थप्नुभयो- कोरोनाका कारण बिश्व आतॅंकित भएका बेला आफ्नो सुरक्षा र आफन्तीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै आफु कतै नजाने र घरका परिवारलाई मात्रै टिका लगाएर दशैँ मनाउने सोंच बनाएको छु । तर बिदेश बसाईको १४ बर्षको अन्तरालमा मैले मेरो मान्यबर बाला घिमिरेको हातबाट टिका र आशिर्बाद लिने गरेको कारण त्यो अबसर भने नछुटाउने मेरो बिचार छ ।’
गायक तथा सर्जक, युवराज आचार्य
बिगत केही बर्षयता जापानलाई कर्मथलो बनाउँदै आउनु भएका गायक तथा सर्जक युवराज आचार्यले यसबर्षको दशैं जापानमा नै मनाउने हुनुभएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जापान शाखाका निबर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका आचार्य म्यसेन्जरमा भिडियो कल गरी आशिर्बाद थाप्ने बताउनु हुन्छ।
दशैँ आउँदा के कुरा बढी सम्झनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, – ‘दशैँ भन्दा बित्तिकै गाउँ बस्तिमा बढिरहेको चहल-पहल, सिँगारिन लागेका गाउँबस्ती संगै सबैको मनमा छाएको उमंग, मुहारमा देखिने चमक्ता, लिङ्गे पिङ, चर्के पिङको रौनक्ताले रमाएका चौतारीहरु, टुसाउन लागेका जमरा संगै आगनीमा तिहारको मालाको लागी टुसाउन लागेका मखमली फुलका अंकुराहरु र प्रर्देशबाट बाबा आमाको आशिर्बाद लिन फर्कियका लाहुरेको ताँतीको सम्झना गर्दछु ।’
उहाले दशैँको तयारी सुनाउँदै भन्नुभयो, -‘आँफु बिदेशमा रहेकोले सबै कुरा मनमै गुम्साएर, महान चाड हो भन्ने कुरा भुलेर बेलुका केही छिटो घर फर्किने र म्यासेन्जर भिडियो कलबाट बाबाआमाको आशिर्बाद मात्रै थाप्ने तयारी बाहेक अन्य केही हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन।’
उहाँको, “आफ्नै मन घाइते गराउँछु”, “फुलको डाली नुघ्ने बेला भो”, “उतै बस उतै माया लाउ”, “झ्याप्पै बत्ती गयो” लगायतका थुप्रै गीतहरु चर्चामा छन भने नारायण कँडेलको शब्द तथा डा. शिव सुबेदीको लय सिर्जनामा रहेको “आफ्नो पन” गीत मार्फत पुन: दर्शक-स्रोता माझ आउने तयारी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
सर्जक, डा. शिव सुबेदी
“घाम जस्तो चम्किलो जुन हुँदैन”, “भुमरीमा परेँ भने म”, “भुल्नै भयो धौ”, “कल्पनामै भएनी देख्छु भनेको”, “किन यस्तो हुन्छ”, “बाँचेको छु धन्न” लगायतका गीतहरुबाट सबैको मनमा बास बस्न सफल सर्जक डा. शिव सुबेदी भने यसपाली दशैँ मनाउने मानसिकतामा नरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहा भन्नुहुन्छ, “अहिले दशैं मनाउने मानसिकतामा छैन म” । – ‘दशैंमा बढी सम्झने भनेको त गाउँघर नै हो । तर अहिले गाउँघरतिर जाँदा पनि पहिलेको जस्तो खुसि मिल्दैन । ठुलाठुला पर्व आउँदा बच्चा नै हुन पाएको भए कति रमाइलो हुँदो हो भन्ने सम्झन्छु ।’
अध्ययन तथा कर्मथलोको रुपमा बिगत केही बर्षयता स्विजरल्याण्डमा रहँदै आउनुभएका सुबेदीले केही समय अगाडी मात्र स्विजरल्याण्डको युनिभर्सिटी अफ लुजानबाट औपचारिक शिक्षाको उच्चतम उपाधि बिध्याबारिधि प्राप्त गर्नु भएको छ।
गायक तथा सर्जक, सूर्य न्यौपाने
नेपाली लोक गीत संगीतको क्षेत्रमा लेखन कार्यमै कलम चलाएर सबैको मन जित्नुभएका अर्का सर्जक सूर्य न्यौपाने पनि हाल नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ । “रुमाल चिनो लौजाउ बैनालाई”, “चरी रुखमा”, “तिम्रै भर परीरहन्छु”, “यो मन किन रुन्थ्यो”, “पढाई मात्र हो” , “रेल छ नाकामा” लगायतका गीतका सर्जक न्यौपाने हाल अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ।
“म यति बेला देश बाहिर अस्ट्रेलियामा छु” – “उहाँले भन्नुभयो” । सोहि कारण पनि नेपाललाई धेरै मिस गरेको छु । नेपालमा हुँदा काठमाडौंबाट दशैँ मनाउन गुल्मी जाँदा साह्रै रमाइलो यात्रा हुन्थ्यो बाटोमा । बिगतका दशैँ सम्झँदै न्यौपाने भन्नुहुन्छ,- ‘त्यो यात्रा पलपलमा सम्झना आइरहेको छ । यहाँ पनि आफन्त परिवारको साथमा दशैँ मनाउने तयारी छ । देश बिदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीलाई वडा दशैँको शुभकामना । कोरोनाबाट बचौ र बचाऊँ ।’
गायक, समुन्द्र राज पौंडेल
आफ्नो कर्मथलो जापान बनाएर बस्दै आउनुभएका गायक समुन्द्र राज पौंडेलको यसपाली दशैँमा टिकाकै दिन पनि जागीर जानु पर्ने हुँदा खासै रमाइलो नहुने भएको बताउनुहुन्छ। दशैँ मात्र हैन आँफुले घर छाडेदेखी कुनै पनि चाड पर्वमा रौनकता नपाएको उहाँ भन्नुहुन्छ ।
‘जब घर छोडें, दशैं मात्र हैन कुनै चाडको पनि रौनक पाईन ।’ पौंडेल बिगतका दशैँ सम्झदै भन्नुहुन्छ, – ‘कति रमाईला दिन थिए हिँजो, ठुलाबडाको आशिर्वाद लिंदै पिङ खेल्दै घर र मामाघरमा बिताएका पल । अब ति दिन कहिले आऊलान् र खै !’
पौंडेलले थप्नुभयो, – ‘अहिले तिनै दिन सम्झदै तिनै पल सम्झदै मनाउंँछु दशैँ । यसपाली पनि टिकाको समयमा काममै हुनेछु । म काममा भएपनि यहाँहरु सम्पुर्णको दशैं रमाईलो होस् । दुर्गा भवानीले रक्षा गरुन् । हरेकको मनमा खुशीको बास होस् । शत्रुको नाश होस् । कोरोनाको कहर हटेर जाओस् । शुभ बिजया दशमी ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जापान शाखाका सह-सचिव समेत् रहनुभएका पौडेलको “धानको बाला झुल्नी बेला भो”, “मर्ने गरी पिपल नसार”, “भगाएरै लैजाउ” लगायतका गीत चर्चामा छन ।
डा. शिव सुबेदी, दशैँ, मिन दर्लामी, युवराज आचार्य, समुन्द्र राज पौंडेल, सूर्य न्यौपाने